Dogecoin Hoos udhaca, Falls 23% Maadaama Elon Musk uu canbaareynayo liiska DOGE | Laga soo bilaabo Linux
Dogecoin Hoos udhac, Falls 23% Maadaama Elon Musk uu dhaleeceynayo liiska DOGE
El Dogecoin Weli waa cryptocurrency kale, oo laga soo qaatay Litecoin oo u adeegsada eyga Shiba Inu xayawaan ahaan. Xaqiiqdii, astaantaas wuxuu ku dhashay meme virus laga bilaabo internetka, taas oo aan kaa dhigeyn doonin inaad qiyaasi karto qiimaha ay Cryptocurrency-gaani gaari doonto, tan iyo bishii hore waxaa la arkay sida ay kor ugu kacday 1000% qiimaheeda, taasoo ka dhalatay isku-dubbaridka ficilada qaarkood, sida oggolaanshaha jilayaasha sida Gene Simmons (Kiss koox muusiko ah), Elon Musk (Tesla / SpaceX), ama heesaha 'Snoop Dog'.
Un dhaqaaq male taas oo faa iido badan u keentay hawl wadeeno badan, laakiin sidoo kale khasaaro qaar ka mid ah kuwa kale. Waad ku mahadsan tahay qiimayaashan taariikhiga ah, waxay ka bilaabantay qiimihiisu ahaa 0.007 yuuro 4tii Janawari, 2021 ilaa 0.073 euro Febraayo 7. Taasi waa in la yiraahdo, bil gudaheed waxay dib u qiimeysay carada dhabta ah, taas oo ka dhigi laheyd lacag aad u tiro badan inay ku guuleysato kuwii maalgashaday markii lacagta ay ku jirtay qiimayaasha hoose oo la iibiyey iyadoo ay weli taagneyd ugu badnaan.
Laakiin dabcan, wax kasta oo kor u kaca badanaa way dhacaan, Dogecoin (DOGE) waxay hoos u dhacday 23% saacado gudahood Febraayo 15. Sidaa darteed, dhammaan buunbuunintii ka dhalatay xilligii hore, waxay u socdeen jahwareer kadib Eeloon Miski wuu rogi doonaa madaxa oo ku saabsan qaybinta aan sinnayn ee lacagaha DOGE oo ku boorin doonta kuwa haysta ugu weyn inay iibiyaan hantidooda.
Hadalka guru ayaa lahaa saameyn xoog leh. Waxaad horeyba u ogayd in waxyaabo yaryar ay si weyn wax uga beddeli karaan suuqa saamiyada, iyo sidoo kale qiyamka ganacsiga ee cryptocurrencies. Laakiin waxa Elon Musk dalbaday waa run, taasina waa in Dogecoin ay 28.7% ku jirto gacmaha qof keliya, 12 ka haysta ee ugu waaweynna waxay leeyihiin ku dhowaad 50% sahayda hadda la heli karo. Ku dhowaad 70% wadarta guud ayaa lagu qiyaasaa in ka badan 100 cinwaan.
«Haddii dhammaan kuwa haysta Dogecoin ay iibiyaan inta badan shilimaadkooda, waxay heli doonaan taageero buuxda. Fikradayda, feejignaan badan ayaa ah dhibaatada kaliya ee dhabta ah«. Musk ayaa laga soo xigtay.
Qiyaastii 7 saacadood kadib farriintaas, qiimaha Dogecoin waxay hoos u dhacday 23%, ka socda $ 0.063 ilaa $ 0.048.
Sidoo kale, aasaasaha laftiisa Dogecoin ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inay iibisay dhamaan shirkadii ay ku lahayd ee DOGE sanadkii 2015 sababo la xiriira dhaqaalo xumo kadib markuu waayay shaqadiisa.
Billy markus Wuxuu ku andacooday inuu Dogecoin ka bilaabay kaftan sanadkii 2013, xusuustaas aan soo xigtay. Isaga laftiisa ayaa la yaabay kor u kaca weyn ee lacagtaan, oo aan marna u maleynayn inay gaari doonto qiyamkaas. Ma uusan maleynin in shukaansiga Elon Musk ee Dogecoin uu u kaxeyn doono sidii uu yeelay, wax ka yarna ma uusan qiyaasin in isla darawalkan uu sidoo kale noqon doono murugadiisa ugu dambeysa ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Dogecoin Hoos udhac, Falls 23% Maadaama Elon Musk uu dhaleeceynayo liiska DOGE
GOS-P1: Sahaminta isha ballaaran ee furan ee Google - Qeybta 1